Sajhasabal.com | Homeनवलपरासीका भक्त बहादुरलाई विदेश पठाइदिने भन्दै दलालले जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर बेच्यो !
नवलपरासीका भक्त बहादुरलाई विदेश पठाइदिने भन्दै दलालले जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर बेच्यो !
भक्त बहादुर दर्जी/नवलपरासी । मेरो घर गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर ७ शक्तिटोलमा पर्छ । हाम्रो परिवारको अवस्था कमजोर भएपनि विदेशको कुरा घरमा नछिरुञ्जेल शान्ति नै थियो । तर अहिले हाम्रो परिवार समस्यामा परेको छ ।
कुरा २०६२ सालको हो । भाइले विदेश जाने मन लागेर गाउँका एजेण्ट दशरथ गिरीलाई भेटेछ । उनले कमाई राम्रो हुन्छ भनेपछि भाइले विदेश जाने निधो ग¥यो । तर एजेण्टले ८५ हजार रुपैयाँ लाग्छ भनेपछि चाहिँ ऊ मात्रै होइन हामी पनि हच्कियौ ।
किन भने उसलाई विदेश पठाउन चाहिने ८५ हजार हामीसँग थिएन । मेरो बुबा लक्ष्मण दर्जीले एजेन्टलाई पैसा छैन भन्नुभयो । तर एजेण्ट अर्को विकल्प देखाइदिए ।
एजेण्टले बुवालाई ‘मेरो नाममा २ कठ्ठा जग्गा पास गरिदेउ म त्यो जग्गा बैकमा राखेर पैसा निकाल्दिन्छु ।’ भने । उनले कमाएर ८५ हजार फिर्ता गरेपछि जग्गा फिर्ता गरिदिन्छु पनि भने ।
त्यतिबेला हामीले बैंकमा जानु र अन्य प्रक्रियाका लागि पनि पैसा नै लाग्ने बरु त्यहि गरे बेस जस्तो लाग्यो । अनि मेरो बुवाले २ कठ्ठा जग्गा दशरथ गिरीको नाममा पास गरिदिनुभयो । जग्गा पास गर्दै गर्दा बुवाले छोरोले विदेश गएर कमाइहाल्छ ८५ हजार फिर्ता गर्न कति पो गाह्रो होला र ? भन्ने सोच्नुभएको थियो । गाउँका चार जना साक्षी बसे र कित्ता नम्बर १२६० को दुई कठ्ठा जग्गा बुवाले दशरथकी श्रीमती शुभलक्ष्मी गिरीको नाममा पास गरिदिनुभो । जग्गा हात परेपछि विदेश पठाउनु त कता हो कता दशरथ गिरी सम्पर्कमै आउन छोडे ।
उनलाई खोज्दै घरमा जाँदा उनीहरु सपरिवार घर जग्गा सबै सम्पत्ति बेचेर गैंडाकोटबाट अन्तै गइसकेको थाहा पायौं । दिन बित्यो, महिना बित्यो तर मेरो भाइको विदेश जाने दिन कहिल्यै आएन । मेरो भाइ मनबीर दर्जी अहिले भारतमा काम गर्दैछ ।
भएको दुई कठ्ठा १७ धुर जग्गा त्यहि पनि २ कठ्ठा जग्गा एजेन्टको नाममा पास गरेपछि मेरो घरमा अहिले समस्या छ । यही समस्याले बुवालाई पिर थपिँदै गयो । न भाइ बिदेश जान सक्यो न त जग्गा नै बाँकी रहयो ।
यही पिरले मेरो बुवाले आत्महत्या गर्नुभयो । जग्गा अर्कैको नाम पास गरिदिएको भए पनि अहिलेसम्म जग्गा दावी गर्न उदीहरु आएका त छैनन् । तर त्यो जग्गा फिर्ता गर्न कहाँ जाने के गर्ने केहि थाहा छैन । जग्गा फिर्ता गर्न के गर्ने र कसरी मुद्धा लड्ने हामीलाई केहि थाहा छैन । -उज्यालो अनलाइनबाट
(नवलपरासीमा रहेको सुरक्षित आप्रवाशन सुचना तथा परामर्श केन्द्रकी परामर्शदाता रञ्जना लम्सालसँगको कुराकानीमा आधारीत)